Hans Zimmer Anorumbidza Spatial Audio Mushure meChipo Kubva Jony Ive | IPhone nhau
Hans Zimmer anorumbidza spatial odhiyo mushure mechipo kubva kuna Jony Ive
Hans Zimmer ndomumwe wevanonyanya kuzivikanwa vanyori papasi. Mafirimu makuru ane mimhanzi yavo seThe Lion King, Interstellar, Gladiator kana Inception. Akagara achizivikanwa nemibairo mikuru yemimhanzi yemakore achangopfuura uye nhasi anoenderera mberi nekunyora mafirimu akaita seDune. Mune imwe yekubvunzurudzwa kwake kwazvino, anovimbisa kuti aimbove mugadziri mukuru weApple, Jony Ive, akamupa mamwe maearphone asingazivikanwe panguva iyoyo kuteerera mimhanzi ine spatial audio tekinoroji mwedzi isati yatanga. Asi hazvo, Zimmer anorumbidza tekinoroji iyi uye anoti anofarira kuteerera kugutsikana nazvo.
Jony Ive anooneka zvakare achipa Hans Zimmer mamwe mahedhifoni
Kubvunzurudza kunobva kuApple Music uye yakaitwa naZane Lowe neanozivikanwa zvikuru akaberekerwa muNew Zealand DJ. Yakawanda yebvunzurudzo yakanangana nepamusoro pebasa raHans Zimmer semunyori uye pesvedzero yemanzwi ake mukusimudzira firimu renyika. Zvakadaro, vaivewo nenguva yekutaura nezve Apple's spatial audio uye zvinhu zvakanaka zvakamuunza muupenyu hwake.
Kutaura zvazviri, akataura kudaro pakati pekuvharirwa Jony Ive akamutumira "mamwe mahedhifoni" nekatsamba kaiti "Ndaita izvi." Akadzipfeka ndokutanga kuteerera spatial audio music. Zimmer akaziva kuti mimhanzi yairidza neinonyudza tekinoroji uye kuti Dolby Atmos inogona kuenderana. Mubvunzurudzo akataura kuti haateerere manzwi ake nekuti anenge agara ari mustereo mode.
AirPods 3 inowedzera spatial odhiyo asi hapana kukurukurirana kwekuwedzera
Zvadaro, Zimmer akafonera shamwari dzake kuDolby ndokuvaudza zvaakanga agamuchira uye nezve chiitiko chekunyudza. Sezvineiwo, Dolby akati "mahedhifoni iwayo haapo, ndinofunga kuti ndiwe wega vaviri." Sezvaanotsinhira mubvunzurudzo, zvinoita sokuti Jony Ive akamupa prototype AirPods Max. Nekudaro, mahedhifoni aya akatangwa muna Zvita 2020 uye Jony Ive akasiya Apple muna 2019. Pachave paine zvisingazivikanwe kugadzirisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Hans Zimmer anorumbidza spatial odhiyo mushure mechipo kubva kuna Jony Ive
Iyo iPhone 14 zvakare isina notch. Makuhwa haana kumira
Iyo itsva AirPods Pro ine dhizaini nyowani uye maficha achasvika mukupera kwa2022 maererano naMing-Chi Kuo.